Mawjaddii labaad ee COVID-19 waxay horseedday in 12 degmo laga go'doomiyo Yurub
Sababta oo ah saameynta 2aad ee Covid-19, macaamiisheenna Yurub intooda badan ee iibsaday dhogorta faux / dhogorta beenta ah / dhogorta macmalka / dhoobada racccoon dhogorta / weelka dharka bakayle dhogorta leh / EF veloa ee warshaddeena faux dhogorta ayaa dhammaantood hadda joojiyay shaqadooda warshadooda… dhamaadka Oktoobar, 2020, mid ka mid ah ...
Sidee loo sameeyaa tayo wanaagsan oo duub leh dharka bakayle?
waxay ahayd ugu yaraan 8 sano inaan soo saarnay dhogorta bakaylaha dhogorta / dhogorta bakaylaha leh dherer iyo culeys kala duwan u sababtuna tahay tayada wanaagsan ee leh kharash-ku-ool, diirimaad diir iyo bakayle dabiici ah gacan-qabsi, hadda way kulul yihiin iib iyo soo dhaweyn adduunka oo dhan. noo ...
amar cusub oo loogu talagalay 1set ee mashiinka nadiifinta iyo 7 tan oo ah maro jilicsan oo spandex ah
Dhawaan waxaan fursad fiican ka helnay mid ka mid ah macaamiisheena oo ka socota Serbia macmiilkan waxaan ku kulanay 2017 carwada carwada Faransiiska, oo furay 100 shaqaale, waxay ka fureen wershad dhexe oo tolida iyo dhimashadaba ah, waxay ku tosheen marada dhogorta fudud ah oo dhimashadii ka dibna waxay u sii qaybiyeen Yurub qaar. waddamada, carwada, ...
Codsiga suuqa dharka ee Shiinaha ayaa kor u kacaya ka dib fasaxa qaran ee Shiinaha…
Sannadka 2020, adduunku wuxuu la il daran yahay carada iyo silica COVID-19. Illaa iyo hadda, 40 milyan oo qof adduunka oo dhan ayuu ku dhacay COVID-19, dhaqaalaha adduunkana waxaa soo maray niyad jabkii ugu xumaa iyo dib u dhac dhaqaale ee taariikhda. Ganacsiga caalamiga sidoo kale waxaa saameeya COVID-19. Laga soo bilaabo Marc ...
Dharkeenna Sherpa Fur iyo Sherpa ee dhogorta iibka ah waa iib kulul sanadka 2020
Sababtoo ah Covid-19, ecnormic-ka adduunka ee hoos u dhacaya sanadka 2020, ka hor intaan macaamiil badani iibsan tiro badan oo raaxo dhaadheer faux raccoon dhogorta, dhogor dawaco dawooyin macmal ah oo aad u sarreeya oo leh miisaan sare, tayo sare iyo qiimo sare. laakiin sanadka 2020, iibka ugu kulul dharka faux dhogorta waa 100% pol ...
Bishii Sebtember, macaamiisheenna Hindiya waxay amarada noo soo dhigaan weelka sare ee 5x 40 cag ah oo ah dharka dhogorta faux ah
Maalin kasta waxaan ka arki jirnay TV-ga in Hindiya ay dhibaato aad u badan ka soo gaadhay cudurka loo yaqaan 'corona Virus', illaa iyo hadda, waxaa jira 5.9 milyan oo qof oo uu ku dhacay COVID-19, mid ka mid ah macaamiilkeenna duugga ah ee ka soo jeeda Hindiya ayaa qaba oo dheehday bishii Juun, runti waa war noo xun Macaamiisheena kale ee India ayaa igu wargaliyay beca ...
5900m faux sherpa fur ayaa loo sameeyay sumcadda caanka ah ee adduunka Harley Davidson
Mootada Harley Davidson, oo ah sumcad caan ka ah adduunka, waxaa la aasaasay 1903. Marka lagu daro ganacsiga mootada, Harley Davidson wuxuu kaloo soo saaray noocyo kala duwan oo ah mootooyinka lagu kaxeeyo, xilliyada firaaqada ah ee fm sanadka 1914. Kadib in ka badan qarni horumar ah, hadda Harley Davidson ayaa ...
Isbedelka warshadaha dhogorta iyo horumarinta dharka Eastsun
Isbeddelka wax walba waxaa had iyo jeer la socda horumarka ilbaxnimada aadanaha, xitaa dhogorta ayaa ka reeban. Kumanaan sano ka hor, bulshada aadamuhu waxay ku dhex jirtay bulsho aasaasi ah, oo ku nool nolol dhiig ceeriin ah, oo u gaajaysan ugaarsiga iyo cunista hilibka, qabow si ay u adeegsato xayawaanka ugaarsiga, ka dib markay ka siibatay dhogorta ...
Dharka Eastsun waxay bilaabaan dib u bilaabida shaqada iyo waxsoosaarkii faafa ee COVID-19 kadib
Magaalada Wuhan, Shiinaha, ayaa u xirneyd tan iyo Janaayo 23,2020 sababo la xiriira saameynta COVID-19 iyo ku faafitaanka Shiinaha. Si loola dagaallamo cudurka faafa, dhammaan magaalooyinka Shiinaha waxay bilaabeen muddo dheer oo xirid ah wicitaankii iyo codsigii dowladda Shiinaha, Janaayo 23-30,2020, waa Shiinaha L ...
Shiinaha warshadda dhogorta ugu fiican ee kaqeyb galeysa 2019 Poland dharka dharka
Waqtiga: Nofeembar 20-22, 2019. Goobta: PATK Warsaw Expo. Dhacdo: 2019 carwada dharka degdega ah, Warsaw, Poland. Inaad noqoto fm fm ugu fiican: Shiinaha, dharka Eastsun had iyo jeer waxay isku dayaan sida ugu fiican inay ula wadaagaan macaamiisha adduunka oo dhan faux fur / suede bonding dhogorta / dhogorta dhogorta. waqtiga aan helno ...
Dharka khaaska ah ee boqoradda Ingiriiska
Markii laga soo kabanayay dhaqaalaha Yurub, dadku waxay bilaabeen inay daba galaan nolol raaxo leh, taas oo ka muuqata baahida sii kordheysa ee dharka dhogorta. Maaddaama George W. Borg uu ikhtiraacay dhogorta macmalka ah, dhogorta macmalka ah waxaa loo qaybin karaa dhogorta dabiiciga ah ee la tolay, tolida dhogorta dabiiciga ah iyo dhogorta dhogorta ah ee macmalka ah sida ay ...
Koofiyadaha Fur, Coat Iyadoo Koolar Fur, Koodhka dhogorta leh ee haweenka leh 'Collar Fur Large', Koodhka Dharka Dumarka dhogorta leh, Jaakada Raga Bambaanada leh ee leh Collar Fur, Jaakad Koolar Fur,